Sida loo ogaado in xawaaraha degdegga ah ee mobiilkaagu u shaqeeyo si sax ah Androidsis
Xaqiiji in taleefanka degdegga ah ee taleefankaagu si fiican u shaqeynayo
Nerea Pereira | | Batariga, Tababarada
Thanks to lacag deg deg ah, waayo-aragnimada taleefannada gacanta ayaa si weyn u fiicnaaday. Waxaan ku nool nahay adduunyo ilbiriqsi kasta la tiriyo, iyo 15 ama 20 daqiiqo oo lacag-bixin ah ayaa lagama maarmaan u ah si loo hubiyo in is-maamul-u-dhisku uu socdo maalinta oo dhan. Sababtaas awgeed, waa lagama maarmaan in la ogaado haddii kharashka degdegga ahi shaqeynayo iyo nooca uu yahay, maaddaama ay jiraan dhowr laga heli karo suuqa.
Noocyada ugu waaweyn ee xawaaraha lagu buuxiyo ee aad ka heli karto suuqa waxay leeyihiin tiknoolajiyad u gaar ah, kuwani waa OPPO, Samsung, Xiaomi, Realme iyo Motorola. Tan iyo mar uun nolosha xeedhadaada waxaad is waydiin kartaa haddii lacagteeda dhakhsaha badan ay si sax ah u shaqeyso, waa inaad ogaataa inay tahay wax aad si fudud u hubin karto markasta oo aad rabto.
1 Sida loo ogaado haddii lacag-siinta degdegga ahi shaqayso
1.1 Xawaaraha Loading
1.2 Raadi animation rarka
1.3 Ka saar shakiga codsigan
1.4 Android wax walba ayey kuu sheegi doontaa
1.5 Nooca xawaaraha degdegga ah
1.6 Hubi xeedho
1.7 Gali Settings
1.8 Booqo websaydhka soo-saaraha
Sida loo ogaado haddii lacag-siinta degdegga ahi shaqayso
Kani wuxuu noqon doonaa wicitaanka ugu horreeya ee kaa caawin doona inaad ogaato haddii wax waliba sidii loogu talagalay u shaqeeyaan. Soo saaruhu wuxuu bixiyaa xog ku saabsan awoodda ku-dallaca, tusaale ahaan wuxuu noqon karaa haddii xaruntaadu ay qasab tahay inay 50% ka darto batteriga muddo 30 daqiiqo ah, laakiin way sii dheereyneysaa, iyadoo laga tagayo xoogaa yar oo u dhexeeya, waa in xawaareynta degdegga ah aysan fulin shaqadeeda.
iQOO 5 iyo iQOO 5 Pro, labada dhamaadka sare ee cusub ayaa horeyba loogu bilaabay muujinta 120 Hz iyo 120 W oo si deg deg ah ku bixinaya
Haddii ay tani dhibaatadu tahay, waa inaad hubi haddii aad ku dallacayso taleefankaaga gacanta xeedho asalka ah. Xaqiiqdu waxay tahay in soo-saaraha uusan had iyo jeer ku darin xeedho-dhaqameedka degdegga ah xirmadiisa iibka. Sababtaas awgeed, waa inaad ka fikirtaa inaad rabto inaad iibsato xeedho noocan oo kale ah si aad uga faa'iidaysato tikniyoolajiyaddan.
Raadi animation rarka
Waxaa jira dad badan soosaarayaasha oo ay kujiraan animations kaladuwan oo loogu talagalay xawaaraha deg degga ah. Sidan ayaa suurtagal ah in lagu ogaado haddii soonka ama qiimaha caadiga ahi shaqeynayo, noocyada OPPO, Realme, Xiaomi, iyo kuwo kale. Marka, markaad isticmaaleysid xawaareyn deg deg ah, waxaad ku arki kartaa astaanta amarka ee terminalka.
Ka saar shakiga codsigan
Waxaa jira codsiyo si gaar ah loo abuuray si loogu muujiyo si faahfaahsan waxa ka dhaca taleefanka gacanta markii uu lacag qaato. Tan awgeed, waxaad ku arki kartaa waqtiga dhabta ah xawaaraha lagu rarayo, waqtiga haray ilaa uu ka gaarayo 100% iyo macluumaad ku saabsan culeysyadii hore. Dhammaan kuwa jira, waxa ugu caansan waa Accubattery, oo muujinaya baarka isku beddela midabka cagaaran marka xawaareynta degdegga ah ay shaqeyso. Iyada oo aad ku arki doonto amperage iyo awoodda guud ee batteriga inta ay ku amraya.
Batroolka Accu - Batariga
Android wax walba ayey kuu sheegi doontaa
Xaqiiqdii, nidaamkan qalliinka ayaa kuu sheegi kara haddii kharashka degdegga ah uu u shaqeeyo sidii la rabay iyo in kale. Ilaa iyo intaad haysatid boosteejada ku xiran kan hadda, waxaad ka arki doontaa fariin shaashadaada qufulka. Tan waxaa lagu dhihi karaa 'Charging' ama 'Fast charge', kiiska ugu horeeya waxaa loola jeedaa in taleefanka uu kudhacayo inta udhaxeysa 5W iyo 7.5W.
Nooca xawaaraha degdegga ah
Sidaan horeyba kor ugu sharaxnay, waxaa jira noocyo kaladuwan oo lacag la'aan ah. Awooddeeda weyn ama ka yar waxay si toos ah ula xiriirtaa baaxadda uu terminal-kaaga ka tirsan yahay. Sidaa darteed, 10W ama 10 watt taageerada amarka ayaa loo tixgeliyaa amar deg deg ah, maaddaama Quick Charge 1.0 horeyba u siisay taageero awooddan. Iyada oo ay taasi jirto, isku mid noqon mayso haddii taleefankaagu gaadho awoodda 10W, mid ka mid ah 18W, ama midka ugu horumarsan, ee 65W.
Xeedho asalka ah waa tilmaanta ugu fiican, tani waxay muujineysaa volts iyo amps ay taageerto. Tusaale wuxuu noqon karaa: haddii 5V / 2A la muujiyo, waxay ka dhigan tahay in awoodda ay u adkeysan karto ay tahay 10W. Xaaladda ah in kharashka degdegga ahi yahay 18W, xeedho-qaadaha waxaan ku arki karnaa 9V / 2A. Xaaladaha oo dhan waxaad kaliya ku qasbanaan doontaa inaad ku dhufato amps-ka volt, si aad u hesho watts-ka xamuulka.
Suurtagal ma ahan dhammaan boosteejooyinka, laakiin in badan oo iyaga ka mid ah waad arki kartaa macluumaadka lagama maarmaanka u ah nooca xamuulka gudaha menu-ka, adoo galaya qaybta Batariga. Sidaa darteed, waad arki kartaa waxa danabku yahay, nooca lacag-bixinta iyo heerka batteriga.
Booqo websaydhka soo-saaraha
Haddii aad gasho qaybta webka ee loogu talagalay taleefankaaga gacanta, waad heli kartaa Faahfaahinta ku saabsan dhaqso u soo rogida iyo batterigaaga. Sida caadiga ah, soosaarayaasha waxay u hibeeyaan qayb si loo xisaabiyo waxtarkooda ugu badan, xawaaraha xamuulka iyo watts-ka xamuulka iyo faahfaahino kale oo badan si aan u ogaan karno nooca culeyska mid uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Xaqiiji in taleefanka degdegga ah ee taleefankaagu si fiican u shaqeynayo
Boqortooyada Geesiyaasha: Dagaal Xeeladeed oo hadda la heli karo oo leh dagaalladeeda ku saleysan ku-saleysan iyo geesiyaal badan oo la uruurinayo
Sida loo isticmaalo Faylka Faylka ah ee Google